Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO – Dagaal Xoogan oo Ka Dhacay Diyaar
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO – Dagaal Xoogan oo Ka Dhacay Diyaar
Warbixintii ugu dambaysay een ka helnay Xarunta Dhexe ee JWXO waxay ka xogwarameen dagaala xoogan oo meela kala duwan oo dalka ah ka socda. Warbixinta dagaalada ay ka warbixiyeen ayaa khasaare laxaadle lagu gaadhsiiyay cadawga oo inta la hubsaday bakhtiga cadawga lagaga dilay ciidan kor u dhaafay 60 askari oo darajoyin kala duwan lahaa iyo dhaawac farabadan.
Dagaalada oo saameeyay hadda dalka gabi ahaantii oo meela kala duwan ka socda ayaa waxaa ka mid ahaa warbixinta aan ka helnay Xarunta Dhexe inay jiraan goobo kale oo cadawga lagu weeraray oo faahfaahinta oo dhamaystiran aan dib ka ogaan doono. Dagaalada aan helnay warbixintooda ayaa u dhacay sidan;
1/8/14 Diyaar oo ka tirsan dagmada Dhagaxbuur ee Xarunta Gobolka Jarar dagaal aad uculus oo CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya kudhaxmaray waxaa ciidanka wayaanaha lagaga laayay inta lahubsaday 20 askari 26 kalana waa lagaga dhaawacay.
1/8/14 Bardalay oo dagmada Awaare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka saama laluudka ah ee gumaysiga itoobiya lagaga dilay 9 askari 13 kalana waa lagaga dhaawacay.
4/8/14 Elale oo dagmada Goday ee xarunta Gobolka Shabeelle katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 3 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
9/8/14 Barmiil oo dagmada Dhuxun katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 6 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay.
9/8/14 Laasoole-oomane oo dagmada Shilaabo ee Gobolka Qoraxay katirsan dagaal adag oo CWXO iyo kuwa cadawga kudhex maray waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 7 askari 9 kalana waa lagaga dhaawacay.
9/8/14 Dhagaxmadow oo Gobolka Jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka dulmiga kucaanbaxay ee maxaysatada Itoobiya lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
Dhanka kale waxaa meelo kaladuwan oo Ogadenia ah kadhacay iska hor imaad udhaxeeya ciidanka nayada jabsan ee gumaysiga Itoobiya iyadoo ay qaar kalana baxsadeen iyagoo kafakanaya cadaadiska kaga imanaya horjoogayaasha TPLF.
8/8/14 Wabiyar oo Qabridahare katirsan dagaal kudhex maray ciidanka cadawga waxay iskaga dileen 9 askari halka ay tiro aan laxaqiijininna ay iska dhaawaceen.
6/8/14 Jigjiga dagaal ku dhexmaray 2 kooxood oo qowlaysatada kamid ah waxay iskaga dileen 2 wayxay ugu yeedhaan shaalaqe ah iyo 2 shaambal.
5/8/14 Birqod iyo Goomaar waxaa kagoostay 8 askari oo ciidanka wayaanaha katirsanaa.
Todobaadkan kudihiisa waxaa magaalada Jigjiga ee xarunta Gobolka Faafan kagoostay 30 askari 22 kamid ah waxay galeen gobolada woqooyi ee soomaaliya halka 8 kalana ay aadeen galbeedka Ethiopia.